နျူကလိယ၌ CRF receptors accumbens မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကို modulate (2007) - သင်၏ ဦး နှောက် On Porn
နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် CRF receptors မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles (2007) တွင်မိတ်ဖက် preference ကို modulate
Horm ပြုမူနေ။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC ဒီဇင်ဘာ 10, 2007 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
Horm ပြုမူနေ။ ဧပြီ 2007; 51 (4): 508-515 ။
ဇန်နဝါရီ 27, 2007 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1016 / j.yhbeh.2007.01.006
Miranda အမ် Lim က,1,4 yan လျူ,2 Andrey အီး Ryabinin,3 Yaohui Bai,1 Zuoxin ဝမ်,2 နှင့် လာရီဂျေ Young က1
မကြာသေးမီကအထောက်အထားများအမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် pair တစုံဘွန်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် corticotropin-releasing အချက် (CRF) များအတွက်အခန်းကဏ္ဍအကြံပြုထားသည်။ ကျနော်တို့အရင်က monogamous နှင့် Non-monogamous vole မျိုးစိတ် CRF အဲဒီ receptor အမျိုးအစား 1 (CRF ၏သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသောဖြန့်ဝေရှိသည်ပြခဲ့ကြ1) နှင့် CRF အဲဒီ receptor အမျိုးအစား2(CRF2) ဦးနှောက်နှင့် CRF အတွက်1 နှင့် CRF2 နျူကလီးယပ် accumbens (NACC) တွင်အဲဒီ receptor ထုလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းကဆက်နွယ်နေကြောင်းနေကြသည်။ Monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာနှင့်ထင်းရှူး voles CRF အဲဒီ receptor အမျိုးအစား 1 (CRF ၏သိသိသာသာနိမ့်အဆင့်ဆင့်ရှိ1) နှင့်အမျိုးအစား2(CRF ၏သိသိသာသာမြင့်မားတဲ့အဆင့်ဆင့်2) Non-monogamous မြက်ခင်းများနှင့် montane voles ထက် NACC အတွက် binding ။ ဤတွင်ကျနော်တို့ကိုတိုက်ရိုက် NACC သို့ CRF ၏ microinjections အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအရှိန်အဟုန်မြှင်ကသတင်းပို့သည်။ NACC နှင့် CRF သို့ CSF ၏ထိန်းချုပ်ရေးထိုး caudate-putamen သို့မိတ်ဖက် preference ကိုလွယ်ကူချောမွေ့ခဲ့ပါဘူး။ အလားတူပင် Non-monogamous မြက်ခင်း voles ၏ NACC သို့ CRF ထိုးလည်းမိတ်ဖက် preference ကိုလွယ်ကူချောမွေ့ခဲ့ပါဘူး။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်, ဒီ CRF-ပံ့ပိုးအကျိုးသက်ရောက်မှု CRF ဖြစ်စေ၏ Co-ဆေးထိုးခြင်းဖြင့်ပိတ်ဆို့ခဲ့သည်1 သို့မဟုတ် CRF2 အဲဒီ receptor NACC သို့ antagonists ။ CRF နှင့် Urocortin-1 (Ucn-1) အတွက် Immunocytochemical အစွန်းအထင်း, CRF နှစ်ခု endogenous ligands1 သို့မဟုတ် CRF2 ဦးနှောက်ထဲမှာ receptors, CRF, ဒါပေမယ့်မရ Ucn-1 ကြောင်းထင်ရှား, immunoreactive အမျှင် NACC အတွက်စည်းဝေးကြ၏။ ဤသည် NACC သို့ဒေသခံ CRF လွှတ်ပေးရန် CRF ကိုသက်ဝင်နိုင်သောယူဆချက်ကို support1 သို့မဟုတ် CRF2 ဒေသတွင်း၌ receptors ။ အတူတူယူကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုလူမှုရေးအပြုအမူအတွက် accumbal CRF စနစ်များများအတွက်ဝတ္ထုအခန်းကဏ္ဍထုတ်ဖေါ်။
keywords: နျူကလိယ accumbens, ပူးတွဲမှု, CRF1, CRF2, corticotropin-releasing အချက်, corticotrophin-releasing ဟော်မုန်း, vole, neuropeptide receptors, pair တစုံနှောင်ကြိုး, လူမှုရေးအပြုအမူ, မယား, မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှု
အဆိုပါ corticotropin-releasing အချက် (CRF) စနစ်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်သောကအခြေခံသည့် neurobiology တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေပါတယ်, ဒါပေမယ့်အများကြီးလျော့နည်းလူမှုရေးအပြုအမူအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။ Microtine ကြွက် (မတူကွဲပြားသောလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများပြဤသို့လူမှုရေးအပြုအမူများ၏ neurobiology ၏လေ့လာမှုမှာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နှိုင်းယှဉ်ချဉ်းကပ်ပူဇော်ငယ်ရွယ်ပြီးဝမ်, 2004) ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ (Microtus ochrogaster) နှင့်ထင်းရှူး voles (Microtus pinetorum) monogamous ပါ၏ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအိမ်ထောင်ဖက် (ကြာရှည်ရွေးချယ် pair တစုံလယ်ပြင်၌ချည်နှောင်သောကြိုးများနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းကိုဖွဲ့စည်းGetz, Carter ကများနှင့် Gavish, 1981; Salo, Shapiro နှင့် Dewsbury, 1993) ။ ဆနျ့ကငျြ, နီးကပ်စွာ-related မြက်ခင်း (Microtus pennsylvanicus) နှင့် montane voles (Microtus montanus) (ကရာနှင့်တိုက်ပိတ်များမှာGruder-အဒမ်နှင့် Getz, 1985; Shapiro နှင့် Dewsbury, 1990) ။ အတိတ်သုတေသန (oxytocin နှင့် vasopressin များအတွက် neuropeptide receptors တွေရဲ့ဦးနှောက်ကိုဖြန့်ဖြူးလူမှုရေးအဖှဲ့အစညျးမှာမျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ပေါ်လာထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်Insel နှင့် Shapiro, 1992; Insel, ဝမ်နှင့်ကူးတို့, 1994; Lim ကဝမ်, Olazabal, Ren, Terwilliger နှင့်လူငယ်တို့, 2004b) ။ သို့သျောလညျးကိုပိုမိုမကြာသေးမီကအထောက်အထားများကို (အခြား neuropeptide စနစ်, CRF လည်းမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံ Bond modulate မှပေါ်လာသောအကြံပြုDeVries, Guptaa, Cardillo, ချိုနှင့် Carter က, 2002).
လူမှုရေးအပြုအမူအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုဆန်းစစ်အတော်လေးအနည်းငယ်လေ့လာမှုများရှိပါသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles မှ exogenous corticosterone ၏အုပ်ချုပ်မှုတစ်ဝတ္ထုအမျိုးသမီး (နဲ့အတူ pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေး facilitated တွေ့ရှိခဲ့DeVries, DeVries, Taymans နှင့် Carter က, 1996) ။ တစ်ဦးကနောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှု intracerebroventricularly အုပ်ချုပ် CRF (icv) ပင် locomotor လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူ (ကိုထိခိုက်ဖို့ပေါ်လာမပြုခဲ့ကြောင်းအလွန်အမင်းနိမ့်ဆေးများမှာအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကို facilitated တွေ့ရှိခဲ့DeVries et al ။ , 2002) ။ ထို့အပွငျမိတ်ဖက် preference ကို (ဦးနှောက်အတွက် alpha-helical CRF ၏ icv အုပ်ချုပ်ရေးပေးသော Non-ရွေးချယ်လုပ်ကွက် CRF receptors ပိတ်ဆို့ခဲ့သည်DeVries et al ။ , 2002) ။ ဤရွေ့ကားဒေတာ CRF ဗဟိုသရုပ်ဆောင်ဦးနှောက် receptors တွေရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုကတဆင့်စိုးရိမ်စိတ်-လွတ်လပ်သောယန္တရားများမှတဆင့် pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးအတွက်အခန်းကဏ္ဍစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ သို့သော် icv-ထုံမွှန်း CRF အလားအလာမိတ်ဖက် preference ကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ဦးနှောက်ဒေသများတွင်မဆိုအရေအတွက်အားအပေါ်သို့သရုပ်ဆောင်နိုင်, ထိုသို့ဒေသများအထူးသပါဝင်ပတ်သက်နေသောဦးနှောက်ကိုလက်ရှိမသိနိုင်ပါဘူး။
အဆိုပါ CRF စနစ်က pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့ပြီးကတည်းကကျနော်တို့ကဒီစနစ်အတွက်အာရုံကြောဆားကစ် monogamous နှင့် Non-monogamous မျိုးစိတ်အကြားကွာခြားလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့အရင်က CRF အဲဒီ receptor အမျိုးအစားများ 1 နှင့်2(CRF ၏ဖြန့်ဝေ, CRF mRNA နှင့် peptide ၏ဖြန့်ဝေအလွန်အမင်း vole မျိုးစိတ်အကြားထိန်းသိမ်းထားပုံပျေါလွင်သော်လည်း, ထိုပြခဲ့ကြ1 နှင့် CRF2) သိသိသာသာ (ကွဲပြားလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများပြလေး vole မျိုးစိတ်အတွက်ဦးနှောက်တစ်လျှောက်လုံးကွာခြားLim က Nair နှင့်လူငယ်တို့, 2005; Lim က Tsivkovskaia, Bai, လူငယ်နှင့် Ryabinin, 2006) ။ binding receptor အများအပြားဟာဦးနှောက်ဒေသများတွင် monogamous လူမှုရေးဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူပတျသကျအားထင်ရှား; သို့သော်ကိုသာနျူကလိယ accumbens (NACC) တသမတ်တည်း monogamous vole မျိုးစိတ်နှစ်မျိုးလုံးနှင့် Non-monogamous vole မျိုးစိတ်နှစ်မျိုးလုံးနှင့်အတူ segregated ။ Monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာနှင့်ထင်းရှူး voles CRF အဲဒီ receptor အမျိုးအစား 1 (CRF ၏သိသိသာသာနိမ့်အဆင့်ဆင့်ရှိ 1) နှင့်အမျိုးအစား2(CRF ၏သိသိသာသာမြင့်မားတဲ့အဆင့်ဆင့်2) (Non-monogamous မြက်ခင်းများနှင့် montane voles ထက် NACC အတွက် bindingLim က et al ။ , 2005).
CRF အတွက်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုသရုပ်ပြကျွန်တော်တို့ရဲ့ neuroanatomical လေ့လာမှုများအပျေါမှာအခြေခံပြီး1 နှင့် CRF2 NACC အတွက်သိပ်သည်းဆကျနော်တို့ NACC အတွင်း CRF အရေးယူမှု, အထူးသဖြင့်, မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် monogamous လူမှုရေးအပြုအမူများအတွက်အရေးပါခဲ့ကြောင်းတွေးဆ။ ပထမဦးစွာကျနော်တို့ NACC သို့တိုက်ရိုက်ထိုးသွင်း CRF သည့်မိတ်ဖက်နှင့်အတူတစ်အတိုကောက်တွဲပြီးအချိန်ပြီးနောက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းလွယ်ကူချောမွေ့စေနိုင်သည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်သည်။ Next ကိုကျနော်တို့ Non-monogamous မြက်ခင်း voles အတွက်တူညီစမ်းသပ်ချက်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက်ကျွန်တော် CRF ကြိုးကိုင်1 နှင့် CRF2 NACC အတွက် CRF-facilitated မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၎င်းတို့၏ဆွေမျိုးပံ့ပိုးမှုများကိုဆုံးဖြတ်ရန် pharmacological ရန်ကိုသုံးနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့ CRF နှစ်ခု endogenous ligands ၏ immunoreactive အစွန်းအထင်းအဘို့သက်သေအထောက်အထားပြသ1 နှင့် CRF2 မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် NACC အတွက်ဦးနှောက်, CRF- နှင့် Urocortin-1 (Ucn-1) တွင် receptors ။ ဒီလေ့လာမှုတွေကနေရလဒ်နှစ်ခုလုံးကို CRF အကြောင်း, CRF, အ NACC အတွက်သရုပ်ဆောင်လူမှုရေး attachment ကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ထို့ပြင်နိုင်သည်ကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ကိုသရုပ်ပြ1 နှင့် CRF2 receptors ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြသည်။
တိရစ္ဆာန်များမူလကအီလီနွိုက်ပြည်နယ်, USA တွင်လယ်ကွင်း-ဖမ်းမိ voles ကနေဆင်းသက်လာကြသည်ဟုဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှဓာတ်ခွဲခန်းမွေးမြူရေးကိုလိုနီများထံမှအရွယ်ရောက်ပြီးသူ, လိင်-ရင်တော့မှားမယ်, ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ (အသက်၏ 70-100 ရက်ပေါင်း) တို့ဖြစ်သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူလိင်-ရင်တော့မှားမယ်မြက်ခင်း voles Emory တက္ကသိုလ်ဓာတ်ခွဲခန်းမွေးမြူရေးကိုလိုနီများထံမှခဲ့ကြသည်။ အသက် 21 ရက်ပေါင်းမှာနို့ပြီးနောက်ဘာသာရပ်များလိင်တူချင်း sibling အားလုံးအတွက်သို့မဟုတ်Trióနှင့်ရေနှင့် Purina ယုန် Chow ထောက်ပံ့ကြော်ငြာ libitum ၌ကျိန်းဝပ်ခဲ့ကြသည်။ 14 အလင်း: အားလုံးလှောင်အိမ်တစ်ခု 10 အပေါ်ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသည် 20 မှာအပူချိန်နှင့်အတူမှောင်မိုက်သံသရာ C. ဒေတာများကို°ထံမှ 87 အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အဆိုပါစုံတွဲကို Bond assay ဘို့နှိုးဆွအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၏တန်းတူနံပါတ်များနှင့်အတူ, အ CRF ဆေးဝါးဗေဒစမ်းသပ်ချက်တွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ 10 အထီးမြက်ခင်း voles ကနေ data ကိုနှိုးဆွအမျိုးသမီးမြက်ခင်း voles ၏တန်းတူနံပါတ်များနှင့်အတူ, အမျှကောင်းစွာအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ရှစ်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အဆိုပါ CRF immunocytochemistry လေ့လာမှုများ (ဎ = အသီးအသီးလိင်များအတွက် 4) တွင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
မိတ်ဖက် preference ကို၏ CRF ပံ့ပိုး
အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles (ဎ = 31) မြန်မာနိုင်ငံသ (ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ stereotaxic နည်းလမ်းများသုံးပြီး NACC သို့ cannulated ခဲ့ကြသည်Aragona, လျူ, Curtis, Stephan နှင့်ဝမ်, 2003a; လျူနှင့်ဝမ်, 2003) ။ ဘာသာရပ်များဆိုဒီယမ် pentobarbital (2.5 မီလီဂရမ်နှုန်း 40 gm ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်) နဲ့ anesthetized နှင့် 26 အဆိုပါ NACC ရည်ရွယ်နှစ်နိုင်ငံလမ်းညွှန် cannulas (ပလတ်စတစ်တစ်ခုမှာ, ရော့, VA သို့) အပြန်အလှန်± 1.7 မီလီမီတာ, Ventral -1, (stereotaxically anterior 4.0 မီလီမီတာကိုထညျ့သှငျးခဲ့ကြမှန်းခဲ့ကြသည် bregma မှမီလီမီတာ) ။ ထိန်းချုပ်ရေးထိုး (ဎ = 6) ကို caudate-putamen (anterior 1.7 မီလီမီတာ, အပြန်အလှန်± 1 မီလီမီတာ, bregma မှ Ventral -2.5 မီလီမီတာ) မှာရည်ရွယ်ခဲ့သည်။ 3-5 ရက်ပေါင်းပြန်လည်နာလန်ထူပြီးနောက်ဘာသာရပ်များ CSF အတွက်ဖျက်သိမ်းအတု CSF သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဖြစ်စေ၏ microinjections (ဘေးထွက်နှုန်း 200 nl) ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ထိုးပစ်မှတ်ဧရိယာသို့လမ်းညွှန် cannula အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော 33 မီလီမီတာတိုးချဲ့တဲ့ 1 gauge အပ်နှင့်ဖွဲ့ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဆေးထိုးအပ်ဖြေရှင်းချက် 20 nl တစ်မြန်နှုန်းမှာတစ်စုပ်စက် (MasterFlex L / S ကိုစံ drive ကို, မော်ဒယ် 7016-21) ကတဖြည်းဖြည်းထုံမွှန်းခဲ့သည့်မှတစ်ဆင့် polyethylene-200 ပြွန်မှတဆင့်တစ်ဦး Hamilton ကပြွတ် (Hamilton က, Reno, NV) ကိုချိတ်ဆက်ခဲ့သည် ဘေးထွက်နှုန်း / မိနစ်။ လူ့ / ကြွက် CRF Sigma (စိန့်လူးဝစ်, MO ကို) မှရရှိသောခဲ့သည်။
NACC သို့ CSF ထိန်းချုပ်မှု (ဎ = 7), 0.01 pg CRF (ဎ = 9), 0.1 pg CRF NACC သို့ (ဎ = 15), နှင့် 0.1 pg CRF caudate-putamen သို့ (ဎ =: တိရစ္ဆာန်များလေးအုပ်စုများ၏တဦးတည်းခွဲခြားခဲ့သည် 6) ။ အဆိုပါ caudate-putamen (က CP) ရုံ NACC မှ dorsal နှင့်လည်း CRF ပါရှိသည်တစ်ဦးနှောက်ဒေသဖြစ်ပါသည်2 receptors, အရှင် CRF သက်ရောက်မှုတစ်ခုခန္ဓာဗေဒထိန်းချုပ်မှုဒေသအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်။ တစ်ခုချင်းစီကိုတိရိစ္ဆာန်ကြိုတင်တစ်ဝတ္ထုအမျိုးသမီးတစ်ဦးအတိုကောက် 200 နာရီတွဲပြီးမှ6nl ပမာဏ၏နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန်ထိုးလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ 0.01 nL အတွက် 200 pg CRF များ၏အာရုံစူးစိုက်မှု 10 nm နေစဉ် 0.1 nL အတွက် 200 pg CRF များ၏အာရုံစူးစိုက်မှု, 100 nm ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါတွက်ချက် K သည်i CRF များအတွက်1 CRF များအတွက်တွက်ချက် Ki စဉ် 11 nm ဖြစ်ပါသည်2 25 nm မှဆွေမျိုးဖြစ်ပါသည် 125ငါ-sauvagine (လေ, Yevich, Baltazar နှင့် Gallager, 1997) ။ တသမတ်တည်းအဖော်ရှာစရာမလိုဘဲ6နာရီတွဲပြီး (ယခင်လေ့လာမှုများအတွက်သရုပ်ပြအဖြစ်, မိတ်ဖက် preference ကိုသွေးဆောင်ပါဘူးAragona et al ။ , 2003a; Aragona, လျူ, ယု, Curtis, Detwiler, Insel နှင့်ဝမ်, 2006) ။ ထိုခဏခြင်းတွင်တွဲပြီးအောက်ပါ, ဘာသာရပ်များမိတ်ဖက် preference ကိုများအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။
မိတ်ဖက် preference ကိုစမ်းသပ်ခြင်းယခင်ကကဲ့သို့၎င်း, တစ်စက္ကန့်လှောင်အိမ်ထဲမှာ tethering ခဲ့တူညီတဲ့အသက်အရွယ်နှင့် sociosexual အတွေ့အကြုံ၏အမျိုးသမီးအဖော်တဦးတည်းလှောင်အိမ်ထဲမှာ tethering ခဲ့သည့်အတွက် 3-chambered ယန္တရားနှင့်ဝတ္ထုအမျိုးသမီး ( "လူစိမ်း") သို့အထီးအားမရပါဝင်သည် ဖော်ပြထား (Carter က, DeVries နှင့် Getz, 1995) ။ တစ်ခုချင်းစီကိုနှိုးဆွအမျိုးသမီးတစ်ချိန်ကမိတ်ဖက်အဖြစ်နှင့်နောက်တဖန်အခြားဘာသာရပ်ရဲ့သူစိမ်းအဖြစ်နှစ်ခုသီးခြားမိတ်ဖက် preference ကိုစမ်းသပ်မှုများတွင်အသုံးပြုသောကြောင့်အသီးအသီးအမျိုးသမီးအဆိုပါ 20 နာရီတွဲပြီးကာလအတွင်းညီမျှသောလူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့ခဲ့ရတယ်။ ဘာသာရပ်များလွတ်လပ်စွာယန္တရားတစ်လျှောက်လုံးကျင်လည်ကျက်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့သည်, နှင့်မိတ်ဖက်များနှင့်သူစိမ်းတွေနဲ့အဆက်အသွယ်သုံးစွဲအချိန်3နာရီစမ်းသပ်မှု၏သင်တန်းကျော် quantified ခဲ့သည်။
Locomotor လှုပ်ရှားမှု (ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ CRF ကုသမှုရှေးခယျြသောဆေးများ, ယေဘုယျ locomotor လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူထိခိုက်ခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့မိတ်ဖက် preference ကိုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်းတိုင်းတာခဲ့သည်Hotta, Shibasaki, Arai နှင့် Demura, 1999) ။ အဆိုပါမိတ်ဖက် preference ကိုယန္တရား၏နှစ်ဦးစလုံးဥမင်လိုဏ်ခေါင်းမှတဆင့်လှောင်အိမ်လက်ဝါးကပ်တိုင်တော်အရေအတွက်က infrared detectors အ အသုံးပြု. အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ လေးအနီအောက်ရောင်ခြည်ထုပ်နှစ်ခုထုပ်နှစ်ခုအိတ်များချိတ်ဆက်တစ်ခုချင်းစီကိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်း flanking နှင့်တကွ, မိတ်ဖက် preference ကိုယန္တရား၏သုံးအိတ်များအနှံ့ရှိပါတယ်။ ဓာတ်ပုံကိုရောင်ခြည်လပ်ချိန်စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကသုံးနာရီကာလအတွင်းတစ်ဦးချင်းစီအဟိတ်တိရစ္ဆာန်များအတွက်စုစုပေါင်းခဲ့သည်။ အမူအကျင့်ကိုစမ်းသပ်ပြီးနောက်ဘာသာရပ်များယဇျပူဇျောခဲ့ကြခြင်းနှင့်ဆေးထိုးက်ဘ်ဆိုက်များ histologically မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ကြသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးမြက်ခင်း voles (ဎ = 10) ကိုလည်းမိတ်ဖက် preference ကို၏ CRF-ပံ့ပိုးကူညီဘို့အစမျးသပျခဲ့သညျ။ CSF ထိန်းချုပ်မှု (ဎ = 4), သို့မဟုတ် CRF 0.1 pg (ဎ = 6): တိရစ္ဆာန်များအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ခြင်းနှင့်ကျပန်းအုပ်စုနှစ်စု၏တဦးတည်းဖို့တာဝန်အဖြစ် NACC သို့မြန်မာနိုင်ငံသ cannulated ခဲ့ကြသည်။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles များအတွက်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့တွဲပြီးနှင့်မိတ်ဖက် preference ကိုစမ်းသပ်မှုအတိအကျဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသမီးနှင့်အတူ cohabitated ပြီးမှငါတို့ကိုလိုနီများထံမှအရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးမြက်ခင်း voles ပုံမှန်အားဖြင့် (ဖက်ဦးစားပေးဖွဲ့စည်းရန်ပါဘူးLim က et al ။ , 2004b).
CRF1- နှင့် CRF2-selective ဆေးဝါးဗေဒနှင့်မိတ်ဖက် preference ကို
0.1 pg CRF (ဎ = 10), 0.1 pg CRF ပေါင်း 10 pg CRF: အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ခြင်းနှင့်သုံးအုပျစုမြား၏တဦးတည်းခွဲခြားအဖြစ်အရွယ်ရောက်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles NACC သို့မြန်မာနိုင်ငံသ cannulated ခဲ့ကြသည်1 ရန် (က CP-154,526) (ဎ = 25), နှင့် 0.1 pg CRF ပေါင်း 10 pg CRF2 ရန် (Anti-sauvagine-30) (ဎ = 15) ။ anti-sauvagine-30 မိုက်ကယ် Owen, Ph.D ဘွဲ့ကိုထံမှ Sigma (စိန့်လူးဝစ်, MO ကို), နှင့်က CP-154,526 မှရရှိသောခဲ့သည် (Emory တက္ကသိုလ်, အတ္တလန်တာ, ဂျော်ဂျီယာ) ။ 10 pg CRF များ၏အာရုံစူးစိုက်မှု1 154,526 nL ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာရန် (က CP-200) 100 pg CRF များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုအနေဖြင့်, 10 nm ဖြစ်ပါသည်2 30 nL ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာရန် (Anti-sauvagine-200) 10 nm ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုတိရိစ္ဆာန်ကြိုတင်တစ်ဝတ္ထုအမျိုးသမီးတစ်ဦးအတိုကောက် 200 နာရီတွဲပြီးတိုက်ရိုက် NACC သို့6nl ပမာဏ၏နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန်ထိုးလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ထိုခဏခြင်းတွင်တွဲပြီးအောက်ပါ, ဘာသာရပ်များမိတ်ဖက် preference ကိုများအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ အမူအကျင့်ကိုစမ်းသပ်ပြီးနောက်ဘာသာရပ်များယဇျပူဇျောခဲ့ကြခြင်းနှင့်ဆေးထိုးက်ဘ်ဆိုက်များ histologically မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ကြသည်။ အဘယ်သူ၏ cannulation က်ဘ်ဆိုက်များအတွက် NACC ပြင်ပတွင်ထားရှိခဲ့ကြသည်တိရစ္ဆာန်များ data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှဖယ်ထုတ်လိုက်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုသောတိရစ္ဆာန်များ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်ရောင်ပြန်ဟပ်မခံခဲ့ရပါ။
တစ်ခုချင်းစီကိုစမ်းသပ်မှုများအတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုစမ်းသပ်ရာမှဒေတာများအချက်များဖြစ်ကြသည် ANOVA ရာနှိုးဆွ (ဖက်သို့မဟုတ်လူစိမ်း) နှင့်ကုသရေးအတွက်2လမ်းကိုအသုံးပြုပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကျောင်းသားရဲ့ t-စမ်းသပ်မှုတစ်ခုစီကိုကုသမှုအုပ်စုတစ်စုအတွင်းမိတ်ဖက်များနှင့်သူစိမ်းတွေနဲ့အဆက်အသွယ်အချိန်နှိုင်းယှဉ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အဓိပ်ပာယျ၏အဆင့် Bonferroni ပြင်ဆင်ချက်မျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်မှုကြောင့်အမျိုးအစား-ငါအမှားအန္တရာယ်များ၏အန္တရာယ် minimize နိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦးချင်းစီစမ်းသပ်မှုများအတွက်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ အထီးသူတို့ကလူစိမ်းထက်မိတ်ဖက်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်အချိန်အများကြီးအဖြစ်နှစ်ကြိမ်ထက် ပို. သုံးစွဲလျှင်မိတ်ဖက် preference ကိုတီထွင်ပြီးလျှင်အဖြစ်ခွဲခြားခဲ့ကြသည်။
locomotor လှုပ်ရှားမှုအတွက်စုဆောင်းဒေတာများတစ်ဦးချင်းစီတိရိစ္ဆာန်အဘို့အနီအောက်ရောင်ခြည်ရောင်ခြည်လပ်ချိန်၏နံပါတ်အဖြစ်စုစုပေါင်းမှာနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကိုကုသအုပ်စုတစ်စုအတွင်းပျမ်းမျှခဲ့သည်။ ရလဒ်များလွတ်လပ်သောအချက်အဖြစ်ကုသမှုနှင့်အတူတစ်လမ်း ANOVA သုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။
CRF နှင့် Urocortin-1 Immunohistochemistry
isoflurane နှင့်အတူ 10 နှင့် 00 MM အတွက် 14% paraformaldehyde (pH ကို 00) ဖော့စဖိတ်-buffered ဆား (PBS) ကနောက်တော်သို့လိုက်ဆားနှင့်အတူ perfused:2နှင့် 10: အရွယ်ရောက်ပြီးသူမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles 7.4 ၏နာရီအကြားနက်ရှိုင်းစွာထုံဆေးခဲ့သညျ။ ခွဲဖြာဦးနှောက်ဟာ 2% paraformaldehyde / PBS ဖြေရှင်းချက်အတွက်နေ့ချင်းညချင်း postfixed နှင့် 30% sucrose / PBS အတွက် cryoprotected ခဲ့ကြသည်။ သုံးဆယ်μmထူအခမဲ့-floating Coronal အပိုင်း (စံ protocols များရှိသညျအတိုငျးတစ် cryostat အပေါ်ကိုခွဲနှင့် immunohistochemistry များအတွက်လုပ်ငန်းများ၌ခဲ့ကြသည်Ryabinin, Criado, Henriksen, Bloom နှင့် Wilson က, 1997; Weitemier, Tsivkovskaia နှင့် Ryabinin, 2005) အစောပိုင်းစမ်းသပ်မှုများတွင်လုပ် vole တစ်ရှူးများအတွက်ချိန်ညှိနှင့်အတူ (Lim က et al ။ , 2006) ။ အတိုချုပ်, endogenous peroxidase လှုပ်ရှားမှု 15% ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်နှင့်အတူ 0.3 မိနစ်ပေါက်ဖွားခြင်းဖြင့်မီးမငြိမ်းခဲ့သည်။ အဆိုပါ Urocortin-1-တိကျတဲ့ antibody ကိုအဘို့, ပိတ်ဆို့ခြင်း 2% bovine Serum Albumin, PBS အတွက် 0.1% heparin, 0.01% ထရီ X-100 နှင့်အတူငါးနာရီပေါက်ဖွားခြင်းဖြင့်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ အဆိုပါ CRF-တိကျတဲ့ antibody ကိုအဘို့, PBS အတွက် 4.5% ဆိတ်သငယ်ကိုသွေးရည်ကြည်, 0.3% ထရီ X-100 နှင့်အတူငါးနာရီပေါက်ဖွားခြင်းဖြင့်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်ပိတ်ဆို့ခြင်း။ 1: Urocortin-1 (Sigma-Aldrich, စိန့်လူးဝစ်, MO ကို) အသိအမှတ်ပြုမူလတန်းယုန်ပဋိ dilution 5,000 အတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ 1: CRF (ကျွန်းဆွယ် Laboratories, San Carlos,, CA) အသိအမှတ်ပြုမူလတန်းပဋိ dilution 15,000 အတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ Biotynylated Anti-ယုန်အလယ်တန်းပဋိ (Vector ဓာတ်ခွဲခန်း Inc ကို, Burlingame,, CA) မူလတန်းပဋိ detect လုပ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဒုတိယပဋိ၏ detection Vectastain ABC ရုပ်သံကိရိယာအစုံ (Vector) ကို အသုံးပြု. ခဲ့များနှင့် enzymatic ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသတ္တု Enhanced DAB ကိရိယာအစုံ (ပီယပ်, Rockf သို့မဟုတ် d, IL, အမေရိကန်နိုင်ငံ) နှင့်အတူပြုလေ၏။ immunostaining ၏တိကျသော CRF သို့မဟုတ် Urocortin-1 ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့မသိရဒေသများရှိ immunoreactivity တစ်ဦးပြီးပြည့်စုံမှုမရှိခြင်းတို့ကအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ Futhermore ဤပဋိများအတွက်ထိန်းချုပ်မှု preabsorption စမ်းသပ်ချက်ယခင်က (ဖျော်ဖြေခဲ့ကြBachtell, Weitemier, သွပ်ရည်စိမ်-Rosa, Tsivkovskaia, Rising, Phillips က, Graham နှင့် Ryabinin, 2003).
Qualititative image ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားတဲ့့ Olympus BX40 ဏုပါဝင်သည်ဟုတဲ့စနစ်သုံးပြီးဖျော်ဖြေခြင်းနှင့် high-resolution ကိုဒစ်ဂျစ်တယ် videocamera (Olympus တို့ Qcolor3) OS ကို-X ကိုအပြေးတစ်ဦးပါ Macintosh ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာကို interfaced ခဲ့သည်။ အကောင်းဆုံးအသီးအသီးကဦးနှောက်ဒေသများအတွက်တိရိစ္ဆာန်များကိုဖြတ်ပြီးလိုက်ဖက်တစ်ခုတည်းအပိုင်းကနေပုံရိပ်တွေကိုဒီဂျစ်တယ်အတူတူအလင်းရောင်ပြင်းထန်မှုမှာစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ အဘယ်သူမျှမ immunopositive အစွန်းအထင်း NACC အတွက်ဆဲလ်အသေကောင်အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်ကတည်းက immunoreactive အာရုံခံ၏နံပါတ် quantitative ရေတွက်မခံခဲ့ရပါဘူး။
NACC အတွက် CRF receptors ၏ Pharmacological ခြယ်လှယ်
ဒါဟာယခင်က (CRF icv ၏ပြုတ်ရည်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့DeVries et al ။ , 2002) ။ CRF အတွက်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုသရုပ်ပြကျွန်တော်တို့ရဲ့ neuroanatomical အချက်အလက်ပေါ်အခြေခံပြီး1 နှင့် CRF2 NACC အတွက်ကျနော်တို့ NACC မိတ်ဖက် preference ကို၏ CRF-ပံ့ပိုးကူညီဘို့အလုပ်ဆောင်ချက်ဆိုက်ခဲ့ကြောင်းတွေးဆ။ အဆိုပါအစောပိုင်းကလေ့လာမှု (CRF ၏ထိုး-မှီခို icv အုပ်ချုပ်ရေးအမျိုးသမီးတစ်ဦးအတိုကောက်တွဲပြီးပြီးနောက်အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေးလွယ်ကူချောမွေ့နိုင်ကြောင်းပြသDeVries et al ။ , 2002) ။ ဒီလေ့လာမှုအပေါ်အခြေခံပြီးကျနော်တို့ NACC သို့ site ကို-တိကျတဲ့ထိုးဘို့ CRF ဆေးများဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ 0.1 nL isotonic ဖြေရှင်းချက် (သို့မဟုတ်အသီးသီး 0.01 nm နှင့် 200 nm) အတွက်ဖျက်သိမ်းကျွန်တော်အသုံးပြုခဲ့တဲ့အဆိုပါဆေးများ, 100 pg နှင့် 10 pg CRF, (ကောင်းစွာ 0.1 μLအတွက်ဖျက်သိမ်း 1 ng နဲ့ 1 ng CRF ၏နိမ့်ဆုံးထိရောက်သော icv ဆေးများကိုအောက်တွင်ခဲ့ကြသည်သို့မဟုတ် အသီးသီး 210 nm နှင့် 2.1 μM,) (DeVries et al ။ , 2002) ။ CRF CRF ဖို့ဦးစားခညျြနှောငျမှပြသခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း1ဒါကြောင့်လည်း CRF မှချည်နှောင်2 သိသိသာသာဆှဖှေဲ့ (K သည်နှင့်အတူi ) အသီးသီး 11 နှင့် 25, ညီမျှ (လေ et al ။ , 1997).
2- လမ်း ANOVA ကို အသုံးပြု၍ အလုံးစုံဒေတာအစုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်တိရိစ္ဆာန်များ၏သိသိသာသာအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖော်ပြသည် (F (1,66) = 6.77, p <0.05), သို့သော်အခြားအဓိကသက်ရောက်မှုများသို့မဟုတ်အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုများကိုမတွေ့ရှိခဲ့ပါ။ သူစိမ်းများနှင့်မိတ်ဖက်များနှင့်အဆက်အသွယ်လုပ်ခြင်းကိုမည်သည့်အုပ်စုများက ပို၍ ဦး စားပေးသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကျောင်းသား၏ t-test များကို Bonferroni p-value ကိုပြုပြင်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ NAcc septal pole သို့နှစ်နာရီထိုးဆေးထိုးခြင်း၊ သို့မဟုတ် 0.1 pg CRF သို့ caudate-putamen သို့ထိုးခြင်းဖြင့်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသရှိ voles များကိုထိန်းချုပ်ခြင်းသည်သူစိမ်းနှင့်အဆက်အသွယ်အတွက်သူစိမ်းကိုလှုံ့ဆော်သည့်တိရိစ္ဆာန်ထက်သိသိသာသာ ပို၍ အချိန်မပေးခဲ့ပါ (p> 0.3, Student's t-test , Bonferroni အဆင့်ကို p <0.01) မှာသတ်မှတ်ထား (ပုံ 1A) ။ နိမ့်ကျ CRF ဆေးဖြင့်ထိုးပေးသော Prairie voles များသည် ၀ တ်ပြုသူနှင့်အဆက်အသွယ်ပိုမိုအချိန်ဖြုန်းရန် ဦး တည်သည်။ (p> 0.01, ကျောင်းသား၏ t-test၊ Bonferroni အဆင့်သည် p <0.08) ဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် NAcc septal တိုင်သို့ ၁၀ ဆပိုမိုမြင့်မားသော CRF ဆေးကိုနှစ်ကြိမ်ထိုးပေးသောမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသများသည်သူစိမ်းများနှင့်မိတ်ဖက်အဆက်အသွယ်အတွက်သိသိသာသာအချိန်ပိုမိုများပြားသည် (p <0.01, Student's t-test, Bonferroni level set) p <10) (ပုံ 1A) ။ အဆိုပါ6ထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များသာ 13 နှစ်ကြိမ်လူစိမ်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းမိတ်ဖက်နှင့်အဆက်အသွယ်၌ရှိသကဲ့သို့အချိန်အများကြီးဖြုန်းအဖြစ်သတ်မှတ်နေတဲ့မိတ်ဖက် preference ကို, ပြသနေစဉ်ထို့အပြင်, CRF ၏ 12 pg ကိုလက်ခံရရှိသည့် 15 တိရစ္ဆာန်များ၏ 0.1 (ကမိတ်ဖက် preference ကိုပြသပုံ 1B) ။ တစ်ဖက် preference ကိုမပြခဲ့ဘူးသော3တိရိစ္ဆာန်များဖွယ်ရှိ 2-လမ်း ANOVA အတွက်ကုသမှုသို့မဟုတ်တစ်ဦးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်တဲ့အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုများမရှိခြင်းလှူဒါန်းခဲ့ရာခိုင်မာတဲ့လူစိမ်းဦးစားပေးကြ၏။ အဆိုပါ NACC သို့ CRF တာဟာသိသိသာသာလူစိမ်းမှဆွေမျိုးသည့်မိတ်ဖက်နှင့်အဆက်အသွယ်အတွက်အချိန်တိုးမြှင့်နေချိန်တွင်ထို့ကြောင့်ကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်အချိန်တစ်ခုခြုံငုံတိုးမှုမရခဲ့ပေ။
NACC သို့ CRF ၏နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန် Micro-ထိုးအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုလွယ်ကူချောမွေ့။ (A) ကို caudate-putamen (က CP) သို့ NACC, ဒါမှမဟုတ် 0.1 pg CRF သို့အတု CSF ကိုလက်ခံရရှိကြောင်းထိန်းချုပ်ရေးတိရစ္ဆာန်များ, သိသိသာသာကျော်မိတ်ဖက်ပိုနှစ်သက်ဘူး ...
သောကြောင့် CRF အတွက်သိသာထင်ရှားသောမျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုများ1 နှင့် CRF2 NAcc တွင်ရှိသောသိပ်သည်းဆများကကျွန်ုပ်တို့သည် NAcc အတွင်း CRF ၏လုပ်ဆောင်မှုသည်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသတွင်မဟုတ်ဘဲမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသများတွင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ကြိုက်နှစ်သက်သောဖွဲ့စည်းမှုကိုသာလွယ်ကူချောမွေ့စေမည်ဟုယူဆခဲ့သည်။ အမှန်မှာ CSF ဖြင့်ထိုးသွင်းထားသောမြက်ခင်းပြင်များ၊ သို့မဟုတ်အလွန်အကျွံပမာဏ 0.1 pg CRF, သည်သူစိမ်းများနှင့်မိတ်ဖက်များနှင့်အဆက်အသွယ်ပိုမိုသိသာစွာအချိန်မပေးနိုင်ပါ (p> 0.5, Student's t-test) (ပုံ 2).
NACC သို့ CRF ၏နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန် Micro-ထိုး Non-monogamous အထီးမြက်ခင်း voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုလွယ်ကူချောမွေ့ရန်ပျက်ကွက်။ NACC သို့အရွယ်ရောက်မြက်ခင်းတု CSF နှင့်အတူထိုးသွင်း voles, ဒါမှမဟုတ် CRF ၏ 0.1 pg, ထက်ဖက်နှင့်အဆက်အသွယ်ပိုမိုအချိန်ကိုမဖြုန်းခဲ့ပါ ...
CRF အတွက်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုအပေါ်အခြေခံပြီး1 နှင့် CRF2 NACC အတွက်ဖြန့်ဖြူးကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံး CRF ကြောင်းတွေးဆ1 နှင့် CRF2 ဖြစ်ကောင်းဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းညွန်အတွက်, မိတ်ဖက် preference ကိုအပြုအမူ modulate လိမ့်မယ်။ 2-way ANOVA ကို အသုံးပြု၍ အချက်အလက်စုဆောင်းမှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်တိရိစ္ဆာန်များ၏သိသာထင်ရှားသောအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖော်ပြသည် (F (1,94) = 7.52, p <0.05), သို့သော်အခြားအဓိကသက်ရောက်မှုများသို့မဟုတ်အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုများကိုမတွေ့ရှိခဲ့ပါ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles CRF ၏ 0.1 pg တစ် ဦး ကော့တေးနှင့်ပေါင်း 10 pg ရွေးချယ် CRF နှင့်အတူထိုးသွင်း2 ဆန့်ကျင်ဆန့်ကျင်ဆန့်ကျင် -uvuvine-30 သည်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သို့မဟုတ်သူစိမ်းနှင့်အချိန်များစွာမကုန်ခဲ့ပါ။ (p> 0.3, Student's t-test, Bonferroni အဆင့်ကို p <0.016) သတ်မှတ်သည်။ပုံ 3A) ။ စိတ်ဝင်စားစရာမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles 0.1 CRF ၏စာမျက်နှာပေါင်း 10 pg ရွေးချယ် CRF တစ်ကော့တေးတွေနဲ့ထိုးသွင်း1 ရန်ဘက်ဖြစ်သော CP-154,526-1 သည်မိတ်ဖက် ဦး စားပေးရွေးချယ်မှုအားပိတ်ဆို့ထားကြောင်းပြသခဲ့သည် (p> 0.5, Student's t-test, Bonferroni level p <0.016) ။ပုံ 3A) ။ NAcc သို့ 0.1 pg CRF ဖြင့်ထိုးသွင်းထိန်းချုပ်ထားသောမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသရှိ voles များကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းစမ်းသပ်ပြီး၊ မိတ်ဖက် ဦး စားပေးမှု၏ပံ့ပိုးကူညီမှု၏မူလရလာဒ်များကိုပုံတူပွားခဲ့သည် (p <0.01, Student's t-test, p <0.016)ပုံ 3A) ။ အဆိုပါ 8 CRF-ကုသမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ထဲက 10 သာ 11 အဆိုပါ 25 တိရစ္ဆာန်များ၏ CRF လက်ခံရရှိတစ်ဖက် preference ကိုပြသနေစဉ်, အပြင်1 CRF လက်ခံရရှိ6တိရိစ္ဆာန်များမှထွက်ရန်နှင့် 152 ရန်တစ်ဖက် preference ကိုပြသ (ပုံ 3B) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုနှစ်ဦးစလုံး CRF ၏ activation ကြောင်းအကြံပြု1 နှင့် CRF2 NACC အတွက် receptors မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကို၏ CRF-သွေးဆောင်ပံ့ပိုးကူညီမှုအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်။
နှစ်ဦးစလုံး CRF1 နှင့် CRF2 မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် CRF-facilitated မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းရန်အတွက် NAcc အတွက် receptors လိုအပ်သည်။ (က) NAcc သို့ 0.1 pg CRF ဖြင့်ထိုးသွင်းသောတိရိစ္ဆာန်များသည်သူစိမ်းများနှင့်မိတ်ဖက်ပြုသူနှင့်အဆက်အသွယ်ပိုမိုပြုလုပ်ခဲ့သည် (p <0.01, Student's ...
Locomotor လှုပ်ရှားမှု NAcc သို့ CRF လက်ခံရရှိသောတိရိစ္ဆာန်များအတွက်နိမ့်ဖြစ်လေ့ရှိသော်လည်း Locomotor လှုပ်ရှားမှု, (F (1,80) = 1.37, p> 0.05, တလမ်း ANOVA) အကြားသိသိသာသာကွာခြားခဲ့ပါဘူး။ ရလဒ်များကိုမှာပြနေကြသည် စားပွဲတင် 1။ အဆိုပါ NACC များအတွက် cannulation site ကိုမှာပြနေသည်ဖေါ်ပြခြင်းတစ်ဦးကကိုယ်စားလှယ်တစ်သျှူးဆိုင်ရာဘာသာရပ်အပိုင်း ပုံ 4.
cannula နေရာချထား၏ Histological စိစစ်အတည်ပြု။ (က) လက်ဝဲတစ်ဝက်အပေါ် receptor autoradiogram CRF ၏တည်နေရာသရုပ်ဖော်2 မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာအတွက် NACC vole ။ (ခ) အတွင်းရပ်စဲ cannula နေရာချထားသရုပ်ဖော်ထားတဲ့ Nissl-စွန်းဦးနှောက်အပိုင်း၏ကိုယ်စားလှယ် photomicrograph ...
Locomotor လှုပ်ရှားမှုသည်ကုသမှုအုပ်စုတစ်ခုအတွင်း၌ပျမ်းမျှအားဖြင့်အနီအောက်ရောင်ခြည်ချိုးသို့မဟုတ်လှောင်အိမ်ဖြတ်ခြင်းများကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ကုသမှုအုပ်စုများအကြားမျှသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ် (F = 1.37, p> 0.05, တလမ်း ANOVA) ။
NACC အတွက် CRF- နှင့် Ucn-1 immunoreactivity
endogenous CRF အဲဒီ receptor ligands NACC အတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်သော၏ photomicrographs ပြသနိုင်ဖို့ကျနော်တို့အရွယ်ရောက်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် CRF- နှင့် Urocortin-1 (Ucn-1) immunoreactivity ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ CRF immunocytochemistry များအတွက်လုပ်ငန်းများ၌ကိုယ်စားလှယ်ဦးနှောက်ကဏ္ဍများအတွက်ပြသထားပါသည် ပုံ 5။ CRF-immunoreactive အမျှင် (အမျှင်များဖြန့်ဖြူးသို့မဟုတ်သိပ်သည်းဆမရှိသိသာကွဲပြားမှုနှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်းအတွက် NACC တွင်တွေ့မြင်ခဲ့ကြပုံ 5b) ။ Ucn-1 အမျှင် (အထီးသို့မဟုတ်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဖြစ်စေမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် NACC တွေ့ရှိကြသည်မဟုတ်ပုံ 5c) ။ ထို့ကွောငျ့ CRF ဇီဝကမ္မ CRF ခညျြနှောငျနိုင်သော endogenous ligands များထဲမှကြောင်းဖြစ်နိုင်1 နှင့် CRF2 မိတ်ဖက် preference ကိုလွယ်ကူချောမွေ့ရန် vole NACC အတွက် receptors ။ မှတ်စု၏, CRF နှစ်ဦးစလုံး CRF မှခညျြနှောငျမှပြသထားသည်1 နှင့် CRF2, CRF ဘို့ဆယ်ခြံဆှဖှေဲ့ပိုမိုမြင့်မားဆှဖှေဲ့မှခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် two- နှင့်အတူ1 (လေ et al ။ , 1997) ။ သို့သျောကြှနျုပျတို့ထိုကဲ့သို့သော Urocortin-2 သို့မဟုတ် Urocortin-3 ကဲ့သို့သောအခြား endogenous ligands လည်းတစ်စုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်း၏အာရုံကြောထိန်းချုပ်မှုအတွက်အထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်ခြေထွက်အုပျစိုးနိုငျပါဘူး။
မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် CRF နှင့် Ucn-1 immunoreactivity ။ NACC ၏ 10x ချဲ့၏ဧရိယာဖေါ်ပြခြင်း (က) Rat Atlas သိထား (စတုဂံကိုကြည့်ပါ) (Paxinos နှင့် Watson, 1998) ။ (ခ) NACC အတွက် CRF-immunoreactive အမျှင်ဖေါ်ပြခြင်း Prairie vole အပိုင်း (မြှားကိုကြည့်ပါ) ။ (ဂ) Prairie ...
ယခင်လေ့လာမှုများတှငျကြှနျုပျတို့ accumbal CRF အတွက်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုဖော်ထုတ်1- နှင့် CRF2 လေး vole မျိုးစိတ်ကိုဖြတ်ပြီးလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းကဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းစကားရပ်။ Monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာနှင့်ထင်းရှူး voles CRF ၏အဆင့်မြင့်ခဲ့2 NACC ၌၎င်း, CRF ၏အောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့်1 Non-monogamous မြက်ခင်းများနှင့် montane vole မျိုးစိတ် (နှိုင်းယှဉ် NACC အတွက်Lim က et al ။ , 2005) ။ ဒီဒေတာကိုအခြေခံပြီးကျနော်တို့ NACC အတွင်း CRF အရေးယူမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် monogamous လူမှုရေးအပြုအမူများအတွက်အရေးပါခဲ့ကြောင်းတွေးဆ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ကိုတိုက်ရိုက် NACC သို့ CRF ၏ Micro-ထိုးတကယ်တော့အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုလွယ်ကူချောမွေ့ဘူးသောပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြသပါ။ Two-လမ်း ANOVA ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဆိုလိုသည်မှာခြုံငုံပိုပြီးအချိန်လူစိမ်းထက်မိတ်ဖက်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကုသမှုသို့မဟုတ်အပြန်အလှန်မရှိအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်, နှိုးဆွတိရိစ္ဆာန်များ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှာဖွေတွေ့ရှိ။ အဆိုပါ3pg CRF NACC အုပ်စု 0.1 တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ခိုင်မာတဲ့လူစိမ်းဦးစားပေးအနေနဲ့အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်၏ထောက်လှမ်းမှုကိုကာကွယ်တားဆီးရန်, အကှဲလှဲဖောင်း။ သို့သော်သူစိမ်းကျမ်းပိုဒ်မိတ်ဖက်နှင့်အတူသုံးစွဲအချိန်သီးခြားနှိုင်းယှဉ်အဆိုပါ 0.1 pg CRF NACC အုပ်စုတစ်စုအတွက်မိတ်ဖက်များအတွက်အရေးပါသောဦးစားပေးဖော်ပြခဲ့တယ်။ ဒီသက်ရောက်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများအားကောင်းရန် attesting, အရန်လေ့လာမှုမှာပုံတူကူးယူခဲ့သည်။ မိတ်ဖက်ဦးစားပေး၌ဤပြောင်းလဲမှုအတွက်မိတ်ဖက်သို့မဟုတ်လူစိမ်းနှင့်အတူသုံးစွဲကာလ၌လျော့နည်းသွားနှင့်အတူသုံးစွဲကာလ၌ကစာရင်းအင်းသိသိသာသာတိုးနဲ့ဆက်စပ်ပေမယ့်အစားတပါးအမျိုးသားမှဆွေမျိုးသည့်မိတ်ဖက်များအတွက်ခြုံငုံတိုးချဲ့ preference ကို၏ရလဒ်ဖြစ်ခဲ့သည်မခံခဲ့ရပါဘူး။ ဆနျ့ကငျြ, CRF Non-monogamous မြက်ခင်း voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုမသက်ရောက်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ကြှနျုပျတို့သညျဤပံ့ပိုးအကျိုးသက်ရောက်မှုနှစ်ဦးစလုံး CRF မှာ CRF ၏အရေးယူမှုအားဖြင့် modulated ကြောင်းပြသ1 နှင့် CRF2 receptors ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့ CRF CRF အပေါ်သို့သရုပ်ဆောင်သည့် endogenous ligands ၏တဦးတည်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းညွှန်ပြ, CRF-immunoreactive အမျှင်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole NACC အတွင်းလက်ရှိဖြစ်ကြောင်း photomicrograph သက်သေအထောက်အထားပြသ1 နှင့် CRF2 မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းစဉ်အတွင်း NACC အတွက် receptors ။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားအဲဒီဒေတာလူမှုရေးအပြုအမူအတွက် NACC အတွင်းသရုပ်ဆောင် CRF စနစ်များများအတွက်ဝတ္ထုအခန်းကဏ္ဍဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာ NACC အတွက် CRF မိတ်ဖက် preference ကို CRF စနစ်များကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည် accumbal ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကနဦးယူဆချက်ကိုထောက်ပံ့နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်း။ ကျနော်တို့နောက်ထပ်ကြောင်း CRF တွေးဆခဲ့သည်2 receptors, အထူးသဖြင့်, CRF ၏ကြွယ်ဝခြင်းသည်အရေးပါသောပေးခဲ့2 နှစ်ခု monogamous vole မျိုးစိတ်မဟုတ်နှစ်ခု Non-monogamous vole မျိုးစိတ် (ထဲမှာ receptorsLim က et al ။ , 2005) ။ CRF ပြုတ်ရည်ကိုထိရောက်စွာ CRF ကင်းမဲ့စေတဲ့မျိုးစိတ်အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုမအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ကြောင့်ကျယ်သောအရပ်၌ vole စမ်းသပ်မှုကနေရလဒ်တွေကို, ဒီယူဆချက်ကိုထောကျပံ့2 NACC အတွက် receptors ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကျွန်တော်တစ်ဦး CRF ၏ Co-အုပ်ချုပ်ရေးကိုတွေ့2မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် -selective ရန်လုပ်ကွက်မိတ်ဖက် preference ကို။ ဤရွေ့ကားဒေတာ CRF များအတွက်အလားအလာအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍထုတ်ဖေါ်2 pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးအတွက် receptors ။
သို့သျောကြှနျုပျတို့သညျလညျး CRF ၏ Co-အုပ်ချုပ်ရေးကိုတွေ့1-selective ရန်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုပိတ်ဆို့။ ဤရလဒ်ကြောင့် CRF ပေးထား ပို. အံ့သြစရာဖြစ်ခဲ့သည်1 receptors Non-monogamous နှင့် monogamous နှစ်ဦးစလုံးမျိုးစိတ်အတွက် NACC အတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤအချက်အလက်များ၏အရေးပါမှု underscore နှစ်ခုလုံး အဲဒီ receptor တိကျတဲ့ထပ်မံတူးဖော်ရာမှအကြိုးခံစားရသောတစ်ဦးရှုပ်ထွေးသောပြဿနာကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေဖို့မိတ်ဖက် preference ကိုနှင့် point ရဲ့စကားရပ်များအတွက်အဲဒီ receptor Subtype ။ ဒါဟာတစ်စုံ Bond အပြုအမူစဉ်အတွင်း NACC အတွက်နှစ်ခုအဲဒီ receptor Subtype အကြားပြောင်းလဲနေသောဆက်စပ်မှုတွေရှိစေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်နောက်ထပ် CRF ၏ဆယ်လူလာ phenotypes စူးစမ်းဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်စေခြင်းငှါ,1- နှင့် CRF2အာရုံခံ -expressing, ဒါမှမဟုတ် CRF လျှင်ကြည့်ဖို့1 နှင့် CRF2 receptors ပင်အတူတူပင်အာရုံခံမှ colocalize ပေလိမ့်မည်။ ဒါဟာ (ထိုကဲ့သို့သော endogenous CRF များအတွက်ရေလှောင်ကန်အဖြစ်ပြုမူစေခြင်းငှါအရာ CRF binding ပရိုတိန်း, ကဲ့သို့သောအခြားအေးဂျင့်များ, ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါလည်းဖြစ်နိုင်Jahn, Eckart, Braun, Tezval နှင့် Spiess, 2002).
မိတ်ဖက် preference ကို facilitated ကြောင်း NACC သို့ site ကို-တိကျတဲ့ထိုးများအတွက်ထိရောက်သော CRF ဆေးများလေ့စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူသော locomotor လှုပ်ရှားမှုအပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါးကုသမှုမျှသိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုခဲ့သည်။ DeVries နှင့် Carter က (2002) (0.1 နှင့် 1.0 ng (အသီးသီး 210 nm နှင့် 2.1 μM) မှာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် preference ကိုများအတွက်ထိရောက်သော CRF icv ဆေးများတွေ့ရှိခဲ့နှင့်ကုသမှုအုပ်စုများအကြား locomotor လှုပ်ရှားမှုအတွင်းကွဲပြားခြားနားမှု detect မပြုခဲ့DeVries et al ။ , 2002) ။ သူတို့ရဲ့ဆေးများ 1000 မှ 10,000 နှစ်ဆယ်-ခြံကျနော်တို့ NACC (10 nm နှင့် 100 nm) သို့ site ကို-အထူးအသုံးပြုကြသည်သောဆေးများထက်အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်ပိုမိုမြင့်မားဖို့ကအနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ် သာ. ကြီးမြတ်ခြင်းနှင့်ခေါက်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကုသမှုအုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီး locomotor လှုပ်ရှားမှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှု detect မပြုခဲ့သော်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာ, တိရစ္ဆာန်အတွက်နည်းပါးလာလှောင်အိမ်ဖြတ်ဆီသို့အနည်းငယ်လမ်းကြောင်းသစ် NACC သို့တစ်ဦးတည်း CRF လက်ခံရရှိသို့သော်ရှိ၏။ က CRF စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူအပေါ်သိမ်မွေ့သက်ရောက်မှုကွိုးစားအားထုထို့ကြောင့်ရွေ့လျား, အလှည့်အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းကိုထိခိုက်နိုင်သည့်စခွေငျးငှါ, ကျနော်တို့ CRF တစ်ဦးတည်းအုပ်စုတွင်လှောင်အိမ်ဖြတ်လျော့နည်းသွားကြောင်းပိုမိုယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်ရှင်းပြချက်တိုးမြှင့်တစ်ဦးမှလည်းယုံကြည်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ပေမယ့် မိတ်ဖက် preference ကို, ဆိုလိုသည်မှာသာအဖော်ရဲ့လှောင်အိမ်အတွင်းသုံးစွဲအချိန်။ ဤသည် CRF စိုးရိမ်စိတ်အပေါ် HPA ဝင်ရိုးသက်ရောက်မှုအနေဖြင့်ဖြစ်နိုင်သည်လွတ်လပ်သော, လူမှုရေးအပြုအမူထိန်းညှိအတွက်ဝတ္ထု, သီးခြားအခန်းကဏ္ဍရှိစေခြင်းငှါ၎င်းအယူအဆထောက်ခံပါတယ်။
ငါတို့သည်လည်း CRF ကဲ့သို့တူညီသောဒေသတွင်း၌ NACC အတွက် CRF-immunoreactivity ၏ photomicrograph သက်သေအထောက်အထားပြသ2 monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် receptors ။ ဤသည် CRF CRF အပေါ်သို့ပြုမူသော endogenous ligands ၏တဦးတည်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းအကြံပြု1 နှင့် CRF2 NACC အတွက် receptors ။ CRF CRF ဖို့ဦးစားခညျြနှောငျမှပြသခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း1ဒါကြောင့်လည်း CRF မှချည်နှောင်2 (သိသိသာသာဆှဖှေဲ့နှင့်အတူလေ et al ။ , 1997) ။ Ucn-1-immunoreactive အမျှင် (NACC တွင်တွေ့မြင်ကြသည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်ထိုကဲ့သို့သော Edinger-Westphal နျူကလိယအဖြစ်ဦးနှောက်၏အခြားဒေသများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်Lim က et al ။ , 2006) ။ ကျနော်တို့ကြောင့်တိကျတဲ့ immunostaining မရှိခြင်းဖို့ vole ဦးနှောက်ထဲမှာ Urocortin-2 သို့မဟုတ် Urocortin-3 အမျှင် map နိုင်ခြင်း ဖြစ်. , သို့သော်လည်း CRF ခညျြနှောငျရသောဤအလားအလာ ligands လျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ပါလိမ့်မယ်2 မြင့်မားသောဆှဖှေဲ့နှင့်အတူ receptors, CRF နှင့်အတူ NACC တွင်လည်းပစ္စုပ္ပန်များမှာ2 receptors ။
အဆိုပါ ventral forebrain နှင့်အထူးသဖြင့် NACC, ထပ်တလဲလဲမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးများအတွက်အရေးပါသောဦးနှောက်ဒေသအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ mesolimbic dopamine ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းအတွက် NACC ၏အခန်းကဏ္ဍကိုပေးထားသောကြောင့်သဘာဝအဆုလာဘ်များနှင့်အားဖြည့်ယန္တယားဟာမိတ်ဖက်ရွေးချယ်ဆုလာဘ်နဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းထိုကဲ့သို့သော pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်း, (အခြေခံကြောင်းတွေးဆထားသည်Aragona et al ။ , 2003a; Lim ကမာဖီနှင့်လူငယ်တို့, 2004a) ။ ကျနော်တို့အရင်က (Non-monogamous vole မျိုးစိတ်အတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆို Over-ပင်အခါ, အထီး pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးအတွက်လိုအပ်သောများမှာ ventral forebrain V1a receptors vasopressin ကြောင်း pharmacological နှင့်မျိုးရိုးဗီဇထိန်းသိမ်းရေးမှတဆင့်ပြသကြLim က et al ။ , 2004b; Lim ကများနှင့်လူငယ်, 2004) ။ အဆိုပါ NACC အတွက် oxytocin receptors အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles (အတွင်းဖက် preference ကိုများအတွက်လိုအပ်သောများမှာလူငယ်တို့, Lim က Gingrich နှင့် Insel, 2001) ။ (Accumbal dopamine D1 နှင့် D2 receptors လည်းယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းနှစ်ဦးစလုံးအတွက်လက်တွဲဖော် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု modulate ပြခဲ့ကြခြင်း, တကယ်တော့ dopamine ဒီအမူအကျင့်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်း oxytocin နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်Aragona et al ။ , 2003a; Aragona et al ။ , 2006; Aragona, လျူ, ယု, Damron, Perlman ဟာနဲ့ဝမ်, 2003b; လျူနှင့်ဝမ်, 2003) ။ ထို့ကြောင့် CRF အဲဒီ receptor activation ဖွယ်ရှိဤရှုပ်ထွေးလူမှုရေးအပြုအမူထုတ်လုပ်နိုင်ရန် NACC အတွက်ပါတယ်ထားတဲ့ပိုကြီးတဲ့ဆားကစ်စတေယျ။ ဒီအယူအဆနှင့်ကိုက်ညီသည် NACC အတွက် CRF receptors အဆိုပါ striatum သို့ dopamine လွှတ်ပေးရန် modulate နိုင်သောသက်သေအထောက်အထား (ရှိlu, လျူ, Huang ကများနှင့် Zhang က, 2003), နှင့် NACC CRF အဲဒီ receptor activation သဘာဝအလျောက်အားဖြည့်ဘို့အနှိပ် bar ကိုလှုံ့ဆော်နိုင်သောအကြံပြုခြင်းမကြာသေးမီပဏာမသက်သေအထောက်အထား (Berridge, Pecine နှင့် Schulkin, 2004) ။ နောက်ထပ်လေ့လာမှုကြောင်း CRF ပြသခဲ့သည်2 NACC မှ dopaminergic စီမံချက်များပို့ပေးရသော ventral tegmental ဧရိယာအတွက် receptors, (, အမူအကျင့်သင်ယူမှုနှင့်ဆုလာဘ်အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်စဉ် Correlate ရေရှည်အလားအလာသွေးဆောင်နိုင်ပါတယ်Ungless, Singh က Crowder, Yaka Ron နဲ့ Bonci, 2003) ။ မိတ်ဖက် preference ကိုသဘာဝအဆုလာဘ်သင်ယူမှုတစ်ပုံစံဖြစ် postulated ကြောင့်, NACC အတွက် CRF receptors မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်းစဉ်အတွင်းနောက်ခံ Synaptic အလားအလာအတွက်အလားတူအခန်းကဏ္ဍလိမ့်မည်။
သဘာဝတွင် Pair ကိုနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးအများအပြားပြင်ပလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ပြည်တွင်းရေးပြည်နယ်များများ၏ပေါင်းစည်းမှုလိုအပ်သည်ရှုပ်ထွေးပြီးသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Pair ကိုနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးလူမှုရေးအသိအမှတ်ပြုမှု, ချဉ်းကပ်မှုနှင့်လူမှုရေးလှုံ့ဆျောမှုအပါအဝင်အများအပြားအပြုအမူဖြစ်စဉ်များများ၏ပေါင်းစပ်ရာမှရလဒ်များကိုနှင့်သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်ပါဝငျသညျ။ oxytocin နှင့် vasopressin Integrated လူမှုရေးလှုံ့ဆော်မှုများ၏အာရုံကြောအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်လူမှုရေးအမှတ်တရများ၏ဖွဲ့စည်းခြင်း (များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်Bielsky, Hu, Szegda, Westphal နှင့်လူငယ်တို့, 2004; ဖာဂူဆန်, လူငယ်, Hearn, Matzuk, Insel နှင့် Winslow, 2000) ။ Dopamine တဦးတည်းရဲ့လက်တွဲဖော်များနှင့်မိတ်ဖက် preference ကိုတည်ထောင်ရန်လိုအပ်သည့်အားဖြည့်နှင့်အတူလူမှုရေးအပြန်အလှန်ကားမောင်းသည့်ကြီးထွားစိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်ပါသည်။ CRF အတွင်းပိုင်းစိတ်ဖိစီးမှုပြည်နယ်မိတ်ဖက် preference ကို modulates ပေးသောအားဖြင့်တစ်ဦးယန္တရားပေးနိုငျသညျ။ CRF အချက်ပြလည်းတစ်စုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်းစဉ်အတွင်းအာရုံကြော plasticity အတွက်ရေရှည်အပြောင်းအလဲများ enable နိုင်ဘူး။ တစ်ခုချင်းစီကို neurotransmitter စနစ်က pair တစုံဘွန်း၏ရှုပ်ထွေးသောအပြုအမူအတွက်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားပေမယ့်အရေးပါအခန်းကဏ္ဍနှင့်တစုံတယောက်သောသူသည်စနစ်၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်းတစ်စုံနှောင်ကြိုးများဖွဲ့စည်းရေးနှောင့်အယှက်လိမ့်မယ်။
လူမှုရေးအပြုအမူ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် CRF ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအနည်းဆုံးစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်သောကအပြုအမူတွေကိုလုပ်ဖို့ CRF သက်ဆိုင်သောလေ့လာမှုများ၏စည်းစိမ်ရှိနေသော်လည်းလေ့လာခဲ့ပြီ။ ခိုင်မာတဲ့သက်သေအထောက်အထားကြောင်း CRF ရှိပါတယ်2 ကြွက်များတွင်စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာကဲ့သို့အပြုအမူကိုလျော့ချဖို့အဲဒီ receptor activation လုပ်ဆောင်ချက်များကို (ဘေးလ်, Contarino, စမစ်, ချမ်း, ရွှေစင်, Sawchenko, Koob, ခြိုငျ့နှင့် Lee က, 2000; ဘေးလ်နှင့်ခြိုငျ့, 2003) ။ လူမှုအပြုအမူ, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်သောကအထူးသဖြင့်အပြုအမူတွေလူမှုရေးထောက်ခံမှုပါဝင်သောသို့မဟုတ်လူမှုရေးအထီးကျန်မှုတွေနဲ့အတူဖြေရှင်းအတွက်အကြီးအကျယ်အပြန်အလှန်ဆက်စပ်သောဖြစ်ကြသည်။ pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပြီမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles သည့်မိတ်ဖက်များထံမှလူမှုရေးခွဲခြာစဉ်အတွင်းမြင့်မားသောပလာစမာ corticosterone အဆင့်ဆင့်ကိုပြသလျက်, မိတ်ဖက်နှင့်အတူပြန်လည်ဆုံဆည်း (အခြေခံမှနောက်ကျောကဤအဆင့်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိCarter က, DeVries, Taymans, ရောဘတ်, ဝီလျံနှင့် Getz, 1997) ။ အတင်းအကျပ်ရေကူးတစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအား, လျှက်အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles သည့်မိတ်ဖက် (နှင့်အတူတစ်အတိုကောက်တွဲပြီးပြီးနောက် pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးတစ်ဦးပံ့ပိုးကူညီပြသDeVries et al ။ , 1996) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့သူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်ထဲကခြားနားဖြစ်ကြောင်း pair တစုံ-ကပ်လျက်တည်ရှိအထီး (မိမိတို့၏မှေးခငျြး-separated များထက်ပုအတင်းအကျပ်ရေကူးစမ်းသပ်မှုတွင်ပိုမို passive ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမဟာဗျူဟာများပြသခြင်း, ထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူပြောင်းလဲမှု NACC အတွက် CRF mRNA တစ်ခုတိုးလာသဖြင့်လိုက်ပါသွားကြသည်Bosch ရဲ့, Nair, နျူမန်နှင့်လူငယ်တို့, 2005).
ဤရွေ့ကား data တွေကိုလူမှုရေးနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုအပြုအမူတွေကိုတစ်ဦးအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိသည်အကြံပြုနှင့်ထို့ပြင်, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်သောက်ပတ်သက်နေအတူတူမော်လီကျူးကိုလည်းလူမှုရေးအပြုအမူအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ။ တကယ်တော့က "လူမှုရေး" neuropeptides vasopressin နဲ့ oxytocin (စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်သောကအပြုအမူ modulate စေခြင်းငှါသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်Bielsky et al ။ , 2004; Landgraf, Gerstberger, Montkowski, Probst, Wotjak, Holsboer နှင့် Engelmann, 1995; Liebsch, Wotjak, Landgraf နှင့် Engelmann, 1996; Mantella, Dana Vollmer ကလီနှင့် Amico, 2003; လက်စွပ် Malberg, Potestio, Ping, Boikess, Luo အဘိဓါန်, Schechter, Rizzo, Rahman ကနှင့် Rosenzweig-Lipson, 2006; Windle, Shanks, Lightman နှင့် Ingram, 1997) ။ ထို့ကြောင့်ပြည်တွင်းရေးစိတ်ဖိစီးမှုပြည်နယ် modulate သောတူညီမော်လီကျူးထိုကဲ့သို့သော pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်းအဖြစ်လူမှုရေးအပြုအမူတွေ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုအထောက်အကူဖြစ်စေ, နှင့်တဦးတည်းအပြုအမူ၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ပြောင်းလဲသည့်မော်လီကျူးများနှင့်ဆားကစ်တကယ်တော့သည် dynamically အခြားထိန်းချုပ်စေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သည်။
Emory တက္ကသိုလ်ကကျနော်တို့သနားယင်းက CP-154,526 ဒြပ်ပေါင်းများနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုပေးဘို့ဒေါက်တာမိုက်ကယ်ဂျေ Owen ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကိုလည်းမြက်ခင်း vole စမ်းသပ်မှုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အကူအညီအတွက် Lorra Miller နဲ့ Meera မိုဒီကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့ DRs ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ A. အ Courtney အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ် State University မှ DeVries နှင့် C. အီလီနွိုက်တက္ကသိုလ်မှဆူး Carter ကချီကာဂို CRF အပေါ်မိမိတို့၏ရှေ့ဆောင်အလုပ်အတွက်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles နှင့် pharmacological စမ်းသပ်ချက်အပေါ်ဒေါက်တာ DeVries '' စာပေးစာယူ၌တည်၏။
ထောက်ခံမှုပေးသနား: ဒီသုတေသန NIH ကထောက်ခံခဲ့သည် LJY မှ ZXW, MH65050 မှအာကာသ, MH13738 မှ MML, AA58616 မှ MH64692 ပေးအပ်နှင့်တွင် NSF STC အိဗ်-9876754 နှင့် Yerkes Center က Grant က RR00165 ။
နျူကလိယဘို့ Aragona BJ, လျူ Y ကို, Curtis JT, Stephan FK, ဝမ် Z. တစ်ဦးကဝေဖန်အခန်းကဏ္ဍအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်-preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် dopamine accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2003a; 23 (8): 3483-90 ။ [PubMed]
Aragona BJ, လျူ Y ကို, ယု YJ, Damron တစ်ဦးက, Perlman ဟာ, G, ဝမ် ZX ။ လူမှုရေး D1- အားဖြင့်ပူးတွဲမှုနှင့်နျူကလိယ accumbens shell ကိုအတွက် D2-type အမျိုးအစား dopamine အဲဒီ receptor activation ၏ဆန့်ကျင်ဘက်မော်ဂျူ။ Horm ပြုမူနေ။ 2003b; 44: 37 ။
Bachtell RK, Weitemier AZ, သွပ်ရည်စိမ်-Rosa တစ်ဦးက, Tsivkovskaia NO, မြင့်တက် fo, Phillips ကတီဂျေ, ဂရေဟမ် NJ, Ryabinin AE ။ အဆိုပါ Edinger-Westphal-lateral septum urocortin လမ်းကြောင်းနှင့်အရက်သုံးစွဲမှုရန်၎င်း၏ဆက်ဆံရေးမျိုး။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23 (6): 2477-87 ။ [PubMed]
ဘေးလ် TL, Contarino တစ်ဦးက, စမစ် GW, ချမ်း R ကို, ရွှေ LH, Sawchenko PE, Koob gf, ခြိုငျ့ WW, Lee က KF ။ ကြွက် corticotropin-releasing ဟော်မုန်းအဲဒီ receptor-2 display ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုမှ hypersensitive များမှာလစ်လပ်။ နတ်မျိုးဗီဇ။ 2000; 24 (4): 410-4 ။ [PubMed]
ဘေးလ် TL, ခြိုငျ့ WW ။ လိင် dichotomous တုံ့ပြန်မှု: corticotropin-releasing အချက်အဲဒီ receptor-2-လစ်လပ်ကြွက်တွေမှာတိုးလာစိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူ။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23 (12): 5295-301 ။ [PubMed]
Berridge KK, Pecine S က, sucrose အကျိုးသည် conditional ချဉ်းကပ်မှုအပေါ် accumbens shell ကိုအတွက် CRF ၏ Schulkin ဂျေစာစားချင်စိတ်ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှု။ အာရုံကြောသိပ္ပံ Abstract Viewer ကို / ခရီးစဉ်အစီအစဉျသည် Society က။ 2004: 437.12 ။
Bielsky လျှင်, Hu SB, Szegda KL, Westphal H ကို, Young က LJ ။ V1a အဲဒီ receptor နောက်ကောက်ကြွက် vasopressin အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူအတွက်လူမှုရေးအသိအမှတ်ပြုမှုနှင့်လျော့ချရေးအတွက်လေးနက်ချို့ယွင်း။ Neuropsychopharmacology ။ 2004; 29 (3): 483-93 ။ [PubMed]
Bosch ရဲ့ OJ, Nair HP က, နျူမန် ID ကို, Young က LJ ။ အထီးကျန်မှုတွေကိုအောက်ပါစိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူအမျိုးသမီးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ယောက်ျားမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက်ပြောင်းလဲဦးနှောက် CRF mRNA နှင့် HPA ဝင်ရိုးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်မှ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ Abstract Viewer ကို / ခရီးစဉ်အစီအစဉျသည်လူ့အဖွဲ့အစည်း; 2005 ။ (Program ကိုအမှတ် 420.4)
Carter က CS, DeVries AC အ, Taymans SE, Roberts သည် RL, Williams က JR, Getz ll ။ Peptides, steroids နှင့် pair တစုံ Bond ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 1997; 807: 260-72 ။ [PubMed]
DeVries AC အ, DeVries ကို MB, Taymans SE, Carter က CS ။ လူမှုရေးဦးစားပေးအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏သက်ရောက်မှုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်လိင် dimorphic ဖြစ်ကြသည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1996; 93 (21): 11980-4 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
DeVries AC အ, Guptaa T က, Cardillo S ကိုချိုက M, Carter က CS ။ Corticotropin-releasing အချက်အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်လူမှုရေးဦးစားပေးဖြစ်ပေါ်သည်။ Psychoneuroendocrinology ။ 2002; 27 (6): 705-14 ။ [PubMed]
ဖာဂူဆန်ဖြစ်မှု, Young က LJ, Hearn EF, Matzuk MM, Insel TR, Winslow JT ။ အဆိုပါ oxytocin ဗီဇချို့တဲ့ကြွက်များတွင်လူမှုရေးသတိမေ့ခြင်း။ နတ်မျိုးဗီဇ။ 2000; 25 (3): 284-8 ။ [PubMed]
Getz ll, Carter က CS, Gavish အယ်လ်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole ၏မိတ်လိုက်မှုစနစ် Microtus ochragaster: pair တစုံ-Bond များအတွက်ဖျော်ဖြေမှုများနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းသက်သေအထောက်အထား။ အမူအကျင့်ဂေဟဗေဒနှင့် Sociobiology ။ 1981; 8: 189-194 ။
Gruder-အဒမ်က S, Getz ll ။ Microtus ochragaster နှင့်အမ် pennsylvanicus အတွက်မိတ်လိုက်စနစ်နှင့်အဖေဘက်ကအမူအကျင့်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်။ Mammalogy ၏ဂျာနယ်။ 1985; 66 (1): 165-167 ။
Hotta M က, Shibasaki T က, Arai K ကို Demura အိပ်ချ် Corticotropin-releasing အချက်အဲဒီ receptor အမျိုးအစား 1 အစားအစာစားသုံးမှုနှင့်ကြွက်များတွင်အမူအကျင့်ပြောင်းလဲမှုများစိတ်ခံစားမှုစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်တားစီး mediates ။ ဦးနှောက် Res ။ 1999; 823 (1-2): 221-5 ။ [PubMed]
Insel TR, Shapiro LE ။ oxytocin အဲဒီ receptor ဖြန့်ဖြူး monogamous နှင့်ဇနီးတစ်ယောက်ထက် ပို. voles အတွက်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းကထင်ဟပ်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1992; 89 (13): 5981-5 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Insel TR, ဝမ် ZX, ကူးတို့ CF. microtine ကြွက်များတွင်လူမှုရေးအဖှဲ့အစညျးနဲ့ဆက်စပ်ဦးနှောက် vasopressin အဲဒီ receptor ဖြန့်ဖြူးပုံစံများ။ J ကို neuroscience ။ 1994; 14 (9): 5381-92 ။ [PubMed]
Jahn အို Eckart K ကို Braun, အို Tezval H ကို, corticotropin-releasing အချက်၏ Spiess ဂျေအဆိုပါ binding ပရိုတိန်း: ligand-binding site နှင့် subunit ဖွဲ့စည်းပုံမှာ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2002; 99 (19): 12055-60 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Landgraf R ကို, Gerstberger R ကို, Montkowski တစ်ဦးက, Probst JC, Wotjak မှန် CT, Holsboer က F, Engelmann အမ် V1 septum သို့ receptor antisense oligodeoxynucleotide vasopressin vasopressin binding, လူမှုရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုအရည်အချင်းများနှင့်ကြွက်များအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်-related အပြုအမူလျော့နည်းစေသည်။ J ကို neuroscience ။ 1995; 15 (6): 4250-8 ။ [PubMed]
Liebsch, G, Wotjak မှန် CT, Landgraf R ကို, Engelmann အမ် Septal vasopressin ကြွက်များတွင်စိုးရိမ်စိတ်-related အပြုအမူ modulates ။ neuroscience လက်တ။ 1996; 217 (2-3): 101-4 ။ [PubMed]
Lim က MM, Murphy က AZ, Young က LJ ။ အဆိုပါ monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole (Microtus ochrogaster) J ကို comp Neurol အတွက် Ventral striatopallidal oxytocin နှင့် vasopressin V1a receptors ။ 2004a; 468 (4): 555-70 ။ [PubMed]
Lim က MM, Nair HP က, Young က LJ ။ မျိုးစိတ်နှင့် monogamous နှင့်ကရာ vole မျိုးစိတ်အတွက် corticotropin-releasing အချက်အဲဒီ receptor Subtype 1 နှင့်2၏ဦးနှောက်ဖြန့်ဖြူးအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ J ကို comp Neurol ။ 2005; 487 (1): 75-92 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Lim က MM, Tsivkovskaia NO, Bai Y ကို, Young က LJ, Ryabinin AE ။ အဆိုပါ Vole ဦးနှောက်ထဲမှာ Corticotropin-ဖြင့်ထုတ်လွှ Factor နှင့် Urocortin 1 ၏ဖြန့်ဝေ။ ဦးနှောက်ပြုမူနေ Evol ။ 2006; 68 (4): 229-240 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Lim က MM, ဝမ် Z ကို, Olazabal DE, Ren က X, Terwilliger EF, Young က LJ ။ တစ်ခုတည်းဗီဇ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးကြိုးကိုင်နေဖြင့်တစ်ဦးကရာမျိုးစိတ်အတွက် Enhanced မိတ်ဖက် preference ကို။ သဘာဝ။ 2004b; 429 (6993): 754-7 ။ [PubMed]
Lim က MM, Young က LJ ။ အဆိုပါ monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက်တစ်စုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးအခြေခံ Vasopressin-မှီခိုအာရုံကြောဆားကစ်။ neuroscience ။ 2004; 125 (1): 35-45 ။ [PubMed]
ကိုကင်းဖို့ lu, L, လျူ Z ကို, Huang က M ကို, Zhang က Z. Dopamine-မှီခိုတုံ့ပြန်မှု corticotropin-releasing အချက်အဲဒီ receptor Subtype ပေါ်မူတည်သည်။ J ကို Neurochem ။ 2003; 84 (6): 1378-86 ။ [PubMed]
Mantella RC, Dana Vollmer က RR လီ X ကို, Amico ဂျေအေ။ အမျိုးသမီး oxytocin-လစ်လပ်ကြွက်တိုးမြှင်စိုးရိမ်စိတ်-related အပြုအမူဖော်ပြရန်။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 2003; 144 (6): 2291-6 ။ [PubMed]
Paxinos, G, Watson ဟာ C. stereotaxic သြဒီနိတ်၌ကြွက်ဦးနှောက်။4။ ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; 1998 ။
လေ RJ, Yevich အီး, Baltazar ကို C, Gallager DW ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ CRF1 နှင့် CRF2 binding ဆိုဒ်များ Autoradiographic localization ။ Neuropsychopharmacology ။ 1997; 17 (5): 308-16 ။ [PubMed]
လက်စွပ် RH အ, Malberg je, Potestio L ကို, Ping J ကို, Boikess S က, Luo အဘိဓါန် B, Schechter LE, Rizzo S က, Rahman က Z ကို, အထီးကြွက်တွေမှာ oxytocin ၏ Rosenzweig-Lipson အက်စ် Anxiolytic ကဲ့သို့သောလှုပ်ရှားမှု: အမူအကျင့်များနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသက်သေအထောက်အထား, ကုထုံးဂယက်ရိုက်။ Psychopharmacology (Berl) 2006: 1-8 ။ [PubMed]
Ryabinin AE, Criado JR, Henriksen SJ, Bloom FE, Wilson က MC ။ အရက်၏အလယ်အလတ်နှင့်အနိမ့်ဆေးများမှ hippocampus နှင့်အခြားဦးနှောက်ဒေသများတွင်က c-Fos ထုတ်ဖော် differential sensitivity ကို။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1997;2(1): 32-43 ။ [PubMed]
Salo AL, Shapiro LE, Dewsbury DA ။ voles ၏ကွဲပြားခြားနားသောမျိုးစိတ်အတွက် Affiliate အပြုအမူ (Microtus) Psychol ကိုယ်စားလှယ် 1993; 72 (1): ။ 316-8 ။ [PubMed]
Shapiro LE, Dewsbury DA ။ vole (Microtus ochrogaster နှင့်အမ် montanus) J ကို comp Psychol နှစ်ခုမျိုးစိတ်အတွက် Affiliate အပြုအမူအတွက်ကွာခြားချက်များ, pair တစုံဘွန်းနှင့်အင်္ဂါဇာတ် cytology ။ 1990; 104 (3): 268-74 ။ [PubMed]
Ungless MA, Singh က V ကို, Crowder TL, Yaka R ကို, Ron: D, Bonci အေ Corticotropin-releasing အချက် dopamine အာရုံခံအတွက် CRF အဲဒီ receptor2မှတဆင့် NMDA receptors potentiate မှ CRF binding ပရိုတိန်းလိုအပ်သည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2003; 39 (3): 401-7 ။ [PubMed]
Weitemier AZ, Tsivkovskaia NO, Ryabinin AE ။ mouse ကိုဦးနှောက်အတွက် Urocortin 1 ဖြန့်ဖြူး strain-မှီခိုသည်။ neuroscience ။ 2005; 132 (3): 729-40 ။ [PubMed]
Windle RJ, Shanks N ကို, Lightman SL, Ingram CD တချပ်ဖြစ်တယ်။ ဗဟို oxytocin အုပ်ချုပ်ရေးကြွက်များတွင်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် corticosterone လွှတ်ပေးရန်နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအပြုအမူလျော့နည်းစေသည်။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 1997; 138 (7): 2829-34 ။ [PubMed]
လူငယ်တို့ LJ, Lim က MM, Gingrich B, Insel TR ။ လူမှုရေးပူးတွဲမှု၏ဆယ်လူလာယန္တရားများ။ Horm ပြုမူနေ။ 2001; 40 (2): 133-8 ။ [PubMed]
လူငယ်တို့ LJ, ဝမ် Z. pair တစုံဘွန်း၏ neurobiology ။ နတ် neuroscience ။ 2004;7(10): 1048-54 ။ [PubMed]